किसानहरूको विरोध: किसानहरूले ध्यान दिए कि तपाईका विरोध नेताहरू गुप्त राज्य एजेन्टहरू छैनन्: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मलाई हालसालै सोधिएको थियो कि म किसानहरूको विरोधलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। मैले छोटो र स्पष्ट जवाफ दिएँ। अवश्य पनि म किसानहरूको विरोधलाई समर्थन गर्दछु, तर हामीले राजनीतिज्ञहरूतर्फ फर्किनु हुँदैन किनकि ती समस्या 'पहिलो स्थानमा' हो। नेदरल्याण्डमा विरोध प्रदर्शन भनेको पूर्ण encapsulated बाहेक अरु केहि छैन। तपाईंसँग परमिट हुनुपर्दछ; ठ्याक्कै कुन समयदेखि कुन समयमा; मालिवेल्डमा कति ट्रयाक्टरहरू; चारै तिर पुलिस अधिकारीहरू छन् जुन सबै उनीहरूको कानुनी नियन्त्रणको अधीनमा छन्। अधिक नगर्नुहोस्! केवल चीजले कार्य गर्दछ सबै नियमहरूमा चकित छ। तर तपाईले यसका लागि कल गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो सजाय योग्य छ।
यसैले मैले प्रस्ताव गरेको छु कि सबै गाईवस्तुहरु घरहरु र चराउने ठाउँबाट बाहिर हिँड्न सक्छन् र लाखौं गाई र सुंगुरहरु सडकमा बसोबास गर्छन्। हेरौं कि यसले अराजकता सिर्जना गर्छ।
त्यो पक्कै पनि हुनेछैन। किसानहरूले त्यो कहिले गर्दैनन्, किनभने त्यसो भए उनीहरूले आफ्नो आयको स्रोत गुमाउनेछन्। र यदि हामी पहिले नै अराजकता प्राप्त, तब यो वास्तवमा राज्य चाहान्छ। को विद्रोह पेगीडा बनाम एन्टिफा पूर्ण रूपमा असफल। मुस्लिम आदिवासीहरू (वास्तवमा अब नयाँ आगमनहरू) विरूद्ध स्वदेशी जनसंख्याको उकालो असफल भएको छ। यो ती लोकप्रिय विद्रोहहरूको साथ सफल हुनेछैन! डच अगाडि जलाउन सकिदैन। त्यसोभए के तपाई राज्यको रूपमा अराजकता चाहानुहुन्छ? त्यसोभए त्यहाँ एउटा मात्र मार्ग छ। त्यस समूहलाई हिट गर्दै कि अझै केही बलहरू छन्: किसानहरू। उनीहरूसँग अराजकता सिर्जना गर्न आवश्यक उपकरणहरू छन्। र अराजकताबाट तपाइँ क्रम सिर्जना गर्नुहोस्। त्यो पुरानो रोमन नियम हो। हो, प्रिय व्यक्तिहरु: राज्य अराजकता चाहान्छ!
अधिक र अधिक पुलिस राज्य निर्माण गर्नका लागि राज्यलाई अलिबिस समय र फेरि चाहिन्छ। त्यसोभए यदि तपाईं नेदरल्याण्डमा भारी उपकरण प्रयोगको लागि हरित बत्ती चाहानुहुन्छ भने तपाईंलाई शत्रु चाहिन्छ। त्यो दुश्मन अब अत्यन्तै चलाख ढ created्गले सिर्जना गरिएको छ जसलाई किसानहरूको संकुचन सम्बन्धी असम्भव मागहरूप्रति क्रोधित बनाएर नाइट्रोजन उत्सर्जन। त्यसो भए यो मात्र भनौं: किसानहरू तपाईलाई विद्रोहको लागि दुरुपयोग गरिरहेका छन् जुन अलिबीले पुलिस राज्यको थप भवनको लागि दिनुपर्दछ।
राज्य चाहन्छ सेना तैनाती गर्न र यहाँ केहि राम्रा बखत गाडीहरू छन्। यदि तपाईंसँग कठोर मात्रामा सशस्त्र व्यक्तिहरू छन् भने (स्वयं-निर्मित कोर्स बाहेक) नक्कली मोक्रो माफिया - थप पुलिस राज्यको लागि अर्को अलिबी), तपाईंसँग पुलिस सेना खडा गर्ने कुनै राम्रो कारण छैन जुन जनता विरुद्ध एलिटलाई सुरक्षा दिन्छ।
त्यसोभए राज्यले किन त्यो सबै चाहन्छ? सरकार किन पुलिस राज्य निर्माण गर्न चाहन्छ? किन उनीहरूले पहिले यसको लागि अराजकता सिर्जना गर्छन्? ठिक छ, पुलिस र सेनाको सुरक्षामा तपाईले निर्माण गर्न सक्ने सबै कुरा, नियन्त्रित र एन्कपसुलेटेडले पक्का गर्छ कि यदि आगोको ज्वाला तपाईले यस कुरामा आफ्नो नियन्त्रण छ। Echt आतंक र लाखौं मानिस Echt थुक्नु को बिरामी हुन यस्तो पुलिस राज्यको निर्माणलाई "सख्त आवश्यकता" मानिन्छ। त्यहाँ एक समय आउँछ जब मान्छेहरू Echt तपाईंको पछाडि पर्खालको बिरूद्ध र त्यसपछि तपाईंलाई धेरै धेरै (धेरै) ब्रेनवाड गरिएको पुलिस र सेना इकाईहरू आवश्यक छ, धेरै हतियार र ठूला उपकरणहरूको साथ।
हेग, 12 अक्टूबर 2018
अपरेशनल व्हील व्हीकलस (डिभीडब्ल्यू) कार्यक्रमको डिफेन्स-विस्तृत प्रतिस्थापन कार्यक्रमले डीएएफ, मर्सिडीज बेन्ज र ल्यान्ड्रोभर जस्ता पा wheel्ग्राहरुको पुरानो पुस्ताको प्रतिस्थापनको साथसाथै सबै डिफेन्स कम्पोनेन्टहरूमा विशिष्ट कामका लागि कन्टेनरको चिन्ता गर्दछ। यस पत्रका साथ म तपाईंलाई डीभीडब्ल्यू कार्यक्रमको पुनर्मूल्यांकनको बारेमा जानकारी दिन्छु जहाँ थप गाडीहरू खरीद गरिन्छ। यस खरीदले परिचालन सवारीहरूको उपलब्धतामा अवरोधहरू समाधान गर्नुपर्दछ र सशस्त्र बलको परिमार्जन बढाउनु पर्छ।
म विश्वस्त छु कि यस विरोधमा भाग लिने किसानहरुको 99% प्रामाणिक छ। यो केवल तार्किक छ कि धेरै मानिसहरूलाई अब यो मनपर्दैन। तलको भिडियो यसको एक मार्मिक उदाहरण हो! यी व्यक्तिहरूसँग मैले अधिक गर्नुपर्दछ। मात्र प्रश्न छ कि छैन नेताहरू त्यस्तो विरोधको राज्यका गोप्य प्यादेहरू छैनन्।
त्यस सन्दर्भमा, म किसानहरुलाई सल्लाह दिन्छु ब्रुस विलिस संग "Surrogates" फिल्म हेर्न र कसरी विरोध आन्दोलनहरु सामान्यतया शक्तिको प्यादा प्यान द्वारा संचालित हो हेर्न। त्यो एक पुरानो सिद्धान्त हो। सत्तामा रहेका मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ कि मानिसहरू सँधै विद्रोही हुन झुकाव राख्दछन् र यसैले प्यादहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छन् कि उनीहरूले निश्चित लक्षित समूहमा घुसाउन दिन्छन्। दशकौं तयारी यस अघि हुन सक्छ, किनभने मास्टर स्क्रिप्ट (मेरो हेर्नुहोस्) नयाँ पुस्तक) शताब्दीयौं पुरानो लिपि हो। यसले प्रत्येक पेसेवर र जनसंख्या समूह (गोप्य समाज मार्फत) अन्तर्गत यसको प्यादेहरू राख्न शक्ति दिन्छ। त्यसकारण उनी व्लादिमीर लेनिन (रूसी क्रान्तिको नेतृत्वमा र जियोनिस्ट सुनले भरिएको ट्रेनलाई लगानी गर्न सक्छिन्): विपक्षलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तम तरिका यसलाई आफैले अगुवाई गर्नु हो!
त्यसकारण किसानहरू, मलाई विश्वास छ, जानाजानी नयाँ नियमहरूको साथ बनिएको छ, किनभने राज्यले नियन्त्रणित विद्रोह चाहान्छ कि अझ बढी पुलिस राज्य निर्माण गर्न सक्षम हुनको लागि अर्को अलिबी सिर्जना गर्न। मास्टर स्क्रिप्ट हो: यूरोप मा पहिलो अराजकता; त्यसपछि अर्डर पुन: भण्डारण गर्नुहोस्। पढ्नुहोस् यहाँ जो कि आदेश पुन: प्राप्ति गर्न आउनेछ।
स्रोत लिङ्क सूची: officielebekendmakingen.nl, volkskrant.nl, volkskrant.nl
आफ्नै विरोध समूहको भाडामा लिनुहोस्
पेग्गा प्रदर्शन प्रदर्शन हेग 10 अप्रिल 2016 पूर्ण रूपमा नकली (फोटो र भिडियो) साबित भयो
ट्याग: किसानहरू, डिफेन्स-चौड़ा, DVOW, विशेष, प्रतिबद्धता, शर्त, सेना, Malieveld, मालिभल्ड, परिचालन, विद्रोह, विरोध, विरोध, ट्रयाक्टरहरू, प्रतिस्थापन, पाe्ग्रा गाडीहरू
16 अक्टोबर 2019 मा 07: 01
किसानहरूका लागि सल्लाह:
तपाईंको विरोधकर्ता नेताहरू फ्रीमासनरी आन्दोलनका सदस्यहरू छन् कि छैनन् जाँच गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, लायन्स क्लब जस्तो क्लब (ती गोप्य समाजहरूबाट स्पिन-अफ)।
16 अक्टोबर 2019 मा 14: 23
मद्दुरोडममा राज्य ट्रोलहरू? के हामी भ्रिजल्याण्ड मार्फत मात्र ट्राटिting गर्दैछौं ...?
PS: रोटरी क्लब forget बिर्सनुहोस्
16 अक्टोबर 2019 मा 15: 48
नेदरल्याण्ड प्रोपेगान्डा ओमरोपका अनुसार यो नक्कली समाचारको नमूना हो:
“अवश्य पनि कथामा कुनै काठ छैन। हिजो प्रदर्शनमा नागरिक प्रतिनिधिहरू थिए तर उनीहरू केवल "मोनिटर" गर्न आएका थिए, पुलिस प्रवक्ता स्टीभन भ्यान सान्तेनले भने। “पुलिसले हिंसालाई उक्साउने कोसिस गर्दैन। तिनीहरूको काम भनेको परिस्थितिलाई हातबाट निकाल्नबाट रोक्नु हो।
16 अक्टोबर 2019 मा 18: 08
"ठिक कसाई अब हामी जान्दछौं कि तपाईले आफ्नो मासु कहिले पनि अस्वीकार गर्नुहुने छैन"
16 अक्टोबर 2019 मा 18: 38
र यो मात्र तरिका हो ... ओर्डो अब चाओ
प्रोटेस्टेन्ट: क्याबिनेटले 'गृहयुद्ध' चाहन्छ
« रुइनरवोल्ट ड्रेन्थे र उनको परिवार, अर्को मनोवैज्ञानिक अपरेसन (साइकोप) अधिक पुलिस राज्यतर्फ
'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय »
कुल भ्रमण: 16.028.534
विश्लेषण गर्नुहोस् op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
SalmonInClick op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
Riffian op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1